" Tsy tokony ho toerana fanasaziana fotsiny ny fonja fa tokony hanarenana sy hanitsiana ny olona diso lalana mba ho olom-baovao izy ireo rehefa miverina eo anivon'ny fiaraha-monina", hoy ny Filoha Andry RAJOELINA. Araka izany dia hohavaozina ihany koa ny fomba fitantanana sy fandraharahana eo anivon'ny fonja manerana an'i Madagasikara. Hampianarina sy hampiofanina amin'ny karazana asa amin'ny sehatra samihafa, toy ny fambolena, ireo voafonja.
Notronin'Atoa Imbiky Herilaza, Mpitahiry ny tombokasem-panjakana sady minisitry ny Fitsarana moa ity fanolorana ny fonja ity.
Nanome voninahitra ny fotoana ihany koa ny Filohan'ny Antenimieran-doholona Herimanana Razafimahefa, niaraka tamin'ny Minisitry ny ati-tany sy ny fitsinjaram-pahefana Pierre Houlder RAMAHOLIMASY, ary ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny Fonja.